Bit By Bit - The n'ọdịnihu - 7.2.3 Ethics na research imewe
Ethics ga-akpali si a elu nchegbu na a Central nchegbu ya mere ga-aghọ a isiokwu nke nnyocha.
Na dijitalụ afọ, ụkpụrụ ọma-ihe karịrị-eri-ga-aghọ a akara ererimbot ke ata mgbochi on eme nnyocha. Ya bụ, na-eme n'ọdịnihu, anyị ga-agbasi mbọ obere na ihe a pụrụ ime na ndị ọzọ na ihe e kwesịrị ime. Dị ka nke ahụ mere, m na-atụ anya na ndị na-achịkwa dabeere na obibia nke na-elekọta mmadụ ọkà mmụta sayensị na ndị ad-hoc obibia nke data ọkà mmụta sayensị ga-evolve n'ebe ihe dị ka ụkpụrụ ndị dabeere na bịakwutere kọwara n'Isi 6. M na-atụ anya na ka ụkpụrụ ọma na-aghọ a ọzọ a ma ama research mgbochi, ọ ga-aghọ a isiokwu nke nnyocha onwe ya. Nnọọ omume n'otu ụzọ ahụ na-elekọta mmadụ na-eme nnyocha ugbu a tinye oge na ume ha na-emepe emepe ọhụrụ ụzọ na-eme ka dị ọnụ ala karịa na ihe ezi atụmatụ, m na-atụ anya na anyị ga-arụ ọrụ ịzụlite ụzọ ya, bụ ndị ethically ọrụ. Mgbanwe a ga-eme ọ bụghị nanị n'ihi na-eme nnyocha na-eche banyere ụkpụrụ ọma dị ka na njedebe, kamakwa n'ihi na-eme nnyocha na-eche banyere ụkpụrụ ọma dị ka ụzọ isi na-eduzi na-elekọta mmadụ nnyocha.
Otu ihe atụ nke a na-emekarị bụ nnyocha na esi nzuzo (Dwork 2008) . Were ya na ihe atụ, a ụlọ ọgwụ ka akowaputara ahụ ike na ndekọ na-eme nnyocha chọrọ ịghọta ihe nakawa etu esi na na data. Differentially onwe algọridim ka ndị mmadụ nwee ajụjụ ahụ ike na ndekọ na-amụ banyere nchịkọta nakawa etu (eg, ndị na-aṅụ sịga na-yikarịrị ka nwere cancer) mgbe n'ibelata ihe ize ndụ ndị na-amụta ihe ọ bụla banyere agwa nke ọ bụla n'otu n'otu. -Emepe emepe a ụdị nzuzo-echebekwa algọridim aghọwo ifịk ebe nnyocha; -ahụ Dwork and Roth (2014) n'ihi na a akwụkwọ-ogologo ọgwụgwọ. Esi nzuzo bụ ihe atụ nke nnyocha obodo n'inwe usoro ziri ezi ịma aka, ka ọ ghọọ otu ọrụ nnyocha a, wee na-enwe ọganihu na ya. Nke a bụ ihe nlereanya nke ndị Echere m na anyị ga na-esiwanye na-ahụ na akụkụ ndị ọzọ nke na-elekọta mmadụ nnyocha.
Dị ka ike nke na-eme nnyocha, mgbe mgbe na mmekota na ụlọ ọrụ ndị na ọchịchị, nọgidekwara na-amụba, ọ ga-esiwanye ike zere mgbagwoju usoro ziri ezi okwu. Ọ nọwo na m ahụmahụ na ọtụtụ na-elekọta mmadụ ọkà mmụta sayensị na data ọkà mmụta sayensị ele ndị a usoro ziri ezi okwu dị ka a apiti a ga-ezere. Ma, m na-eche na avoidance ga-aghọwanye untenable dị ka a atụmatụ. Anyị, dị ka obodo, nwere ike na-ekpegara nsogbu ndị a ma ọ bụrụ na anyị na-awụlikwa elu na na awagide ha na creativity na mgbalị na anyị emetụta ndị ọzọ research nsogbu.